‘राष्ट्रप्रमुख महिला भएको देशमा महिलाहरू छाउगोठमा मरिरहेका छन्’ « Dhankuta Khabar
‘राष्ट्रप्रमुख महिला भएको देशमा महिलाहरू छाउगोठमा मरिरहेका छन्’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १६ गर्पन मेहलीमा जन्मेकीमोहनमाया ढकाल अहिले कर्णाली प्रदेशकै समृद्ध सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख छिन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा आफ्नो विगत र वर्तमान तथा भविष्यका योजनाहरू साटेकी छन् ।
ढकालका अनुभव र योजना (उनकै शब्दमा)
सानैमा विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने, पार्टीका विभिन्न अभियानमा जाने गर्थें । बाल्यकाल दाउरा बोक्ने, गाई– गोरु चराउने काम पनि गरियो । तर बजार क्षेत्रमा बस्ने भएकाले त्यति मेलापातमा बाल्यकाल गुजार्नु परेन ।
आर्थिकरूपमा मध्यमवर्गीय परिवार, शिक्षाको चेताना भएकाले उनले बाल्यावस्थामै विद्यालयको दैलो टेक्न पाएँ । तर मेरै उमेरका अन्य बालिका भने घाँस–दाउरमै दिन बिताउन बाध्य थिए ।
त्यतिबेला अहिलेको जत्तिको महिलाहरूलाई स्वतन्त्रता थिएन । तै पनि म संघर्ष गर्दै गएँ । मैले राजनीति नै गर्छु भन्ने योजना पनि बनाएको थिइन् । बिहे भएपछि मात्रै राजनीतिमा सक्रिय भए । मैले राजनीति गर्दा मेरो घरमा पनि पूर्ण स्वतन्त्रता त थिएन । वातावरण म आफैले बनाउँदै गए ।
मलाई शिक्षकहरूले पनि प्रेरणा दिए, जसका कारण म आजको यो अवस्थामा आइपुगेकी छु ।
पहिलेको तुलनामा अहिले त धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले अभिभाववकहरूमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना छ । पहिले समाजसेवा गर्न भनेर छोरी–चेलीलाई छुट हुँदैनथ्यो । अभिभावकहरूले छोरी पढोस् र सामान्य जागिर गरोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्थ्यो ।
तर अहिले समय फेरिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा अहिले विभिन्न नृत्य, अन्य प्रतियोगिताहरू हुने गरेका छन् । अभिभावकहरूले आफ्नी छोरी राम्रो मान्छे बनोस्, उसलाई रुचिअनुरूपको शिक्षा–दिक्षा दिनुपर्छ भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ ।
समाजमा परिवर्तन धेरै भए पनि हाम्रो समाजमा बालविवाह भने कायमै छ । बालविवाहले हाम्रो समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । सबै क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अझै पनि पछि पारिएको छ । भन्न सजिलो छ । तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । चुनौतीहरू थपिएका छन् ।
महिलाहरूलाई मुलधारमा ल्याउन नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ । कानूनमा महिला अधिकार पर्याप्त भए पनि राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भन्ने अधिकार त आयो तर त्यो पूर्णरूपमा लागु हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ऐन नियमावली बनेको छैन ।
छोरा समान छोरीले अंश पाउनुपर्ने भन्ने छ । तर अहिलेसम्म त्यो पनि लागु भएको छैन । राजनीतिकरूपमा पनि आरक्षणको सीटबाहेक क्षमता हुँदाहुँदै पनि अवसरहरू नपाउने अवस्था आएको छ । बाध्यात्मक अवस्था बाहेक अन्यत्र पनि महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर समाजले अझै बुझ्न नसकेको मेरो आकलन छ ।
मैले महिलालाई नेतृत्व तहमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दै आएकी छु । त्यस्तै महिलालाई आर्थिकरूपमा समेत सक्षम बनाउनु पर्छ । महिलाहरूलाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्न सकेको खण्डमा उनीहरू आत्मनिर्भर बन्छन् । अनिमात्र महिलाहरूले अधिकार प्रयोग सक्छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख भएका नाताले महिलालाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउने मेरो सोच छ । विशेष गरी आय–आर्जनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने खालका, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको तर्फबाट ल्याउने तयारमा छौं ।
महिलाका नाममा आएको बजेट अब आय–आर्जनका क्षेत्रमा लगाउने मेरो योजना छ । आर्थिक रूपमा सक्षम र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ र सकेसम्म बालविवाहलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
समग्र कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरूको दयनीय अवस्था छ । मुलुककै सर्वोच्च पदमा महिला आसिन भएको बेला गाउँघरका महिलाको भने छाउ गोठमै मृत्यु भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको प्रकोप नै छ भनौं । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने, ती किशोरीलाई छाउगोठबाट कसरी बाहिर ल्याउने, उनीहरूको प्रजनन अधिकार कसरी स्थापित गर्ने जस्ता धेरै समस्याहरू छन् ।
बहुपति प्रथा अहिले पनि हिमाली जिल्लामा कायमै छ । त्यसलाई हटाउनु छ । दिनहुँ महिला हिंसा बढिरहेको छ । यसलाई घटाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय र केन्द्र सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने महिला र पुरुष समान छन् भन्ने दिन टाढा छैन ।-लोकान्तरबाट साभार
निरीह राधा रमिते समाज
महिलाहरुको हैसियत अझै पनि माग्‍नेकै! : नायिका रेखा थापा
सम्झँदै बिर्संदै रामप्रसाद
फोरम सँग मिल्न लागेका अाेलीलाई बाबुरामले दिए यस्तो दनक